Beesha Caalamka Oo Taageertay Go’aankii Guddiga Doorashada Madaxweynaha Dalka – STAR FM SOMALIA
Wakiilada Beesha Caalamka ayaa soo dhaweeyay Go’aankii Guddiga isku dhafka ah ee labada Aqal doorashada Madaxweynaha ay ku shaaciyeen in doorashada Madaxweynaha 10-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka la qabto 15-ka bishaan May.
War-saxaafadeed kasoo baxay Beesha Caalamka ayaa waxaa lagu sheegay in Wakiilada ay dhiira-gelineyso horumarka wanaagsan ee laga gaaray diiwaan-gelinta Musharrixiinta u taagan xilka Madaxweynaha iyo u diyaargarowga kale ee loogu jiro inaan laga dib dhicin waqtiga kama dambeysta ah ee doorashada.
Beesha Caalamka ayaa tilmaamtay in uusan jirin wax marmarsiinyo ah oo sabab u noqon karta dib u dhac kale oo dheeraad ah, iyadoo labada Aqal ee Baarlamaankaba la dhaariyay oo si buuxda u shaqeynayaan.
Wakiilada ayaa sidoo kale ugu baaqay Guddoonka Baarlamaanka Federaalka inay xalliyaan wax kasta oo doorashada ka taagan, si ay u qabsoonto doorashada Madaxweynaha 10-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
“Waxaan ku boorinaynaa madaxda Soomaaliya inay si degdeg ah, nabdoon oo kalsooni ku dheehan tahay ku soo gabagabeeyaan marxaladdan kama dambeysta ah ee geeddi-socodka doorashada si loogu soo jeesto arrimaha dalka iyo dowlad-dhisidda ee mudnaanta leh” ayaa lagu yiri Warka kasoo baxay Beesha Caalamka.
War-saxaafadeedka Beesha Caalamka ayaa waxaa si wadajir ah u soo saaray “Hawlgalka Kalaguurka Midowga Afrika ee Soomaaliya (ATMIS), Belgium, Canada, Denmark, Masar, Itoobiya, Midowga Yurub (EU), Finland, Jarmalka, Urur-Goboleedka (IGAD), Ireland, Talyaaniga, Japan, Kenya, Boqortooyada Sacuudi Carabiya, Ururka Jaamacadda Carabta (LAS), Holand, Norway, Ururka Iskaashiga Dalalka Islaamka (OIC), Qadar, Ruushka, Suudaan, Iswiidhan, Iswisarland, Turkiga, Uganda, Isutagga Imaaraadka Carabta, Boqortooyada Midowday ee Britain, Dowladda Maraykanka and Qaramada Midoobay.